नेपाल आज | ‘डा.भट्टराई र उपेन्द्र दुवैको पृष्ठभूमि आपराधिक : एकता स्वभाविक’ (भिडियोसहित)
‘डा.भट्टराई र उपेन्द्र दुवैको पृष्ठभूमि आपराधिक : एकता स्वभाविक’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । मधेस मामिला जानकार डा. राजेश अहिराजले नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीचको एकतालाई स्वार्थप्रेरित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । दुई दलले आफूलाई लगानी गर्ने आफ्नो मालिकको आदेश मानेर बलजफ्ती एकतामा गएको डा. अहिराजले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘यो फोर्स ब्यान्डीङ हो । यसमा नीति, सिद्धान्त, विचार, अपनत्व केही पनि छैन । डा. भट्टराईले नै संविधान जारी गर्ने सबै व्यवस्था मिलाएका थिए । संविधान गलत हो भनेर उपेन्द्र यादव नाकामा धर्ना दिन पुगेका थिए । संविधान जलाउने पनि गरे । ६३ सालमा ५० जना मधेसीलाई गौरमा हत्या गर्ने काम उपेन्द्र यादवकै नेतृत्वमा भएको थियो । हत्या गर्ने र गराउने दुवै एक ठाउँमा आएका छन् ।’
बाबुराम भट्टराईविरुद्ध १७ हजार मानिस मारेको अभियोग छ । त्यो अभियाग त हट्नेवाला छैन छैन । माओवादी पार्टी छाडेँ भन्दैमा त्यो अपराधले छाड्नेवाला छैन । अहिराज भन्छन्, ‘अपराध र राजनीति फरक कुरा हो । अपराध गर्ने, मानवताविरोधी काम गर्नेले सजाय पाउनु पर्छ । हिंस्रक राजनीतिक गर्ने जति नै विद्वान भए पनि तिनीहरु अपराधी नै हुन् ।’
नेपालमा मान्छे मार्नेहरुले उन्मुक्ति पाएको तर १५ सय घुस लिएको भनेर हत्कडी लाग्ने, टिभीमै खिचेर देखाइदिने, जागिर खोसिदिने कार्य अमुक निकायले गरिरहेको अहिराज बताउँछन् । अहिराज प्रश्न गर्छन्, ‘माओवादीका बाबुरामसँग नै मिसिनु थियो भने गौरमा त्यतिका मधेसी जनताको हत्या गर्न आवश्यक थिएन । यसो किन गरियो ?’
मधेसमा मधेसका नाममा राजनीति गर्ने धेरै भए । मधेसका लागि राजनीति उपेन्द्र यादवले पनि नगरेको अहिराज दावी गर्छन् ।
विखण्डनवादी एजेन्डा छाडेर मूलधारको राजनीतिमा आएका सिके राउतले पनि ११ बुँदे सहमति गर्दा कतै पनि मधेस र मधेसी शब्द समावेश गरेनन् । उनको अभियान पनि आफ्नो दल विशेषका लागि मात्रै रहेछ भन्ने अहिराज विश्लेषण गर्छन् । राजपा, संघीय समाजवादी आदि दलहरु सिके राउतसँग डराएको उनले उल्लेख गरे । तर सिकेलाई गाली गरिरहेका छन् । आफ्नो कुकर्मको समिक्षा होला कि भनेर मधेसी दलहरु सिकेसँग डराएको डा. अहिराजले दावी गरे ।